SomaliTalk.com » 2012 » June » 12
Home » Archive Maalinta June 12th, 2012
Wararkii ugu Dambeeyay ee Horyaalka Soomaalida Jidda
Iyadoo magaalada Jidda ee dalka Boqortooyada Sacuudiga uu si xiiso leh uga socdo tartanka sanadlaha ah ee horyaalka kubada cagta Jaaliyada Soomaaliyeed ee Jiddah ayaa ayaa cayaarihii ugu dambeeyay waxaa kooxuhu isu arkeen sedan: Xiddigaha Ruweys VS Batroolka – Iftin stars VS Baanow Stars –GololeyVS Fc-Alba – iyo Janaale VS LLPP . Hadii aan ku horeyno ciyaartii dhexmartey kooxaha Kooxaha Xiddigaha...
Xildhibaan C/raxmaan C/Shukuur oo Isu Sharaxay Madaxweyne
Xaflad ballaaran oo lagu taageeray Murashaxa madaxtinimada Wasiirkii hore ee qorsheynta Xildhibaan C/raxmaan C/Shukuur ayaa manta ka dhacday Hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho. Qoraalka oo sawiro wata ka eeg halkan (pdf) Xafladaan oo si heer sare ah loo agaasimay ayaa waxaa si weyn uga qeyb galay dad matalayey qeybaha ka la duwan ee bulshada oo ay hor kacayeen Ugaasyo, salaadiin, cuqaal, Siyaasiyiin,...
Shirkadda Golis oo loo magacaabay maareeye cusub
Xaflad si heer sare loo mamusey ayaa ka dhacday xarunta shirkadda Golis ee magaalada Bosaaso. xafladaas ayaa ahayd xil-wareejinta maareeyaha shirkadda Golis.waxaana maareeye cusub loo magacabey Mudane/ Cali Xaaji Warsame. Xafladaas ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda ugu sareeysa ee shirkadda Golis ee uu hogaaminayey mudane/Cabdi Casiis Guureeye Kaarshe gudoomiyaha guddiga sare ee shirkada iyo maamulayaasha...